ဟဟ..ကျုပ်တို့တစ်သက်လုံးအားပေးလာတဲ့ အိုင်စီက ကိုလေးဖြူကတော့ ဘယ်ပါတီကိုမဲထည့်ရမလည်းမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးတဲ့ ဗျာ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဟဟ..ကျုပ်တို့တစ်သက်လုံးအားပေးလာတဲ့ အိုင်စီက ကိုလေးဖြူကတော့ ဘယ်ပါတီကိုမဲထည့်ရမလည်းမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးတဲ့ ဗျာ..
ဟဟ..ကျုပ်တို့တစ်သက်လုံးအားပေးလာတဲ့ အိုင်စီက ကိုလေးဖြူကတော့ ဘယ်ပါတီကိုမဲထည့်ရမလည်းမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးတဲ့ ဗျာ..
Posted by chityimhtoo on Mar 27, 2012 in News | 20 comments
ဟုတ်ပါတယ်လူတိုင်းမှာလွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအိုင်စီရဲ့တစ်သက်လုံးပရိတ်သတ်ပါ။ အိုင်စီအခွေဆိုရင်ရအောင်ပြေးဝယ်တယ်။ အိုင်စီစတိတ်ရှိူးဆိုရင် ရှိသမျှပုံအောပြီး အငတ်ခံသွားကြည့်ကျတယ် ။ပြည်သူတွေဘာဖြစ်ချင်တာလည်းကိုတော့ သိသင့်ပါတယ်ဗျာ …ပြည်သူတွေဘာလိုချင်တာလည်းဆိုတာကိုလည်း သိသင့်ပါတယ်။ တစ်သက်လုံး
ယူလာပြီးပြီ … ဒီတစ်ခါတော့ ပြည်သူတွေအတွက် ပရိတ်သတ်အတွက် ပြန်ပေးပါဦးဗျာ။
တဂျီးရယ် ဖိုတိုကသေးသွားတယ် ကြီးပေးလို့ရလား…အဲ့ဂျာနယ်ကကိုလေးဖြူပြောတာကိုကြည့်ပြီးဒေါသ
အလိပ်လိုက်ထွက်ပြီး အီးပါလိုက်တာ ..ချီးပါအလိပ်လိုက်ထွက်လာတယ်….
လေးဖြူရေးထားတာက…ဧပြီလ ၁ရက်နေ့မှာ ဘယ်ပါတီကို မဲပေးရမလဲလို့ မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။
ခုကသီချင်းဆိုဖို့ အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ် မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။ 2010 ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတော့ ကြံ့
ပါပေပဲ။ ရော့သီချင်းတွေ ပရိသတ် ကို
နဝင်ပီလျံ ဖို့ထက် ကျန်တာတွေက သာမည ပါ။
ကိုချစ်ရင်ထူး ကို တစ်ခုပြောပြချင်တာက ၊ လေးဖြူ ၊ အငဲ ၊ မျိုးကြီး တို့ ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေ ကို ပြန်နားထောင်ပြီး စာသားတွေ ကို သေချာဖတ်ကြည့်ပါဦးဗျာ ။ ဟိုးတုန်းကတဲ က ဆိုခဲ့တာတွေနော ။
ကိုချစ်ရင်ထူးရေ….။ ဒီနေရာမှာ နဲနဲလောက် ၀င်ပြီးလျှာရှည်လိုက်ချင်ပါတယ်…။ လေးဖြူ တို့ အငဲ တို့ဆိုတာက ကျုပ်တို့ အသက်အစိတ်ဝန်းကျင်လောက်မှ အဆိုတော်ဖြစ်တာဗျ…။ ဒါကြောင့် ကျုပ်တို့ တစ်သက်လံးအားပေးလာကြတဲ့ ဆိုတဲ့စကားက နေ၀န်းနီတို့နဲ့ သိပ်မပတ်သက်ဘူးဗျ…။ ကျုပ်တို့ တစ်သက်လုံး အားပေးလာကြတာက play boy သန်းနိုင်တို့ ဘိုဘိုဟန်တို့ဗျ…။ ဘာလို့ဆို ကျုပ်တို့ စကားပြောတတ်တဲ့ အရွယ်မှာ သူတို့သီချင်းတွေလိုက်ဆိုနေပြီ…။ အဲဒိနောက် ကျုပ်တို့အားပေးလာတာက ကိုညီထွဋ်တို့ ဂျက်မြသောင်းတို့ ဗိုလ်ထီး တို့ မစ္စတာ တိုးကြီးတို့ ထူးအိမ်သင်တို့ ဗျ…။ မင်းသားကြီးသီချင်းတွေလည်း အကြိုက်ပေါ့ဗျာ…။ အဲဒီတော့ကာ ကျုပ်တို့ တစ်သက်လုံး အားပေးလာတဲ့ဆို့ အများနဲ့ ဆိုင်တဲ့ စကားလုံးကြီး နေ၀န်းနီနဲ့ သိပ်တော့ မဆိုင်ဘူးဗျာ…။ ကျုပ်က အဆိုတော်ဆို ကော်နီလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားတာဗျ….။ သျှီဆိုတဲ့ ကောင်မလေးလည်း မဆိုးပါဘူး …။အဲဒိအဆိုတော်မလေးနှစ်ယောက် အကြောင်းရေးစမ်းပါဦး
အငဲနဲ့လေးဖြူ အင်းသားများဟာ တို့တောင်ကြီးရပ်ဝန်းကဂီတသမားတွေပါ ဒါပေမယ့်
မို့ ကြိုက်တော့ကြိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် စန္ဒရားဦးလှထွတ်တို့ ဒေါ်မာမာအေးတို့ကိုသုံးရမယ့်စကားတွေဖြစ်နေ
………….. အတိသယဝုတိအလင်္ကာကို နဲနဲဖြေရှင်းစေချင်ပါတယ်။
ပိုစ့် ပိုင်ရှင် ရေ … ကိုယ်နဲ့ မတူ ငဆားနူ လုပ်ဖို့ အဆင်ပြေ နိုင်တော့မယ် မထင်ပါဘူးဗျာ … ။
သူ့ဘာသာ သူ ဘယ်ပါတီ ပေးပေး … သူ့လွတ်လပ် ခွင့်ပဲဗျာ ….. ကျွန်တော့ စိတ်ထင် … (စိတ်ထင်) .. ကျွန်တော် တို့တွေ လောဘ လေး နဲနဲ သတ်ကြမှ ဗျ … နော့
တို့တောင်ကြီး တို့ မန်းလေး ..တို့ ရန်ကုန် ..
ဘယ်ရပ်ဝန်းကပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဆြာတို့ ….
မြန်မာ အဆိုတော် မြန်မာ သီချင်း လို့ မြင်ကြည့်ပေးကြပါနော…
ဟမ် … တသက်လုံးလို့ သုံးမရ၀ူး ဟုတ်စ…
အကြင်သူသည် အသက် ၂၀ အရွယ် ချာတိတ်တယောက်ဖြစ်အံ့…
(အမှတ်မမှားရင်)၁၉၉၃ က စ အဆိုတော်ဖြစ်ခဲ့သည့် ကိုလေးဖြူသီချင်းများအား
ဒေါ်မာမာအေး လောက် ကီးမမြင့်ဘူး ????
ဒေါ်မာမာအေးလည်း အဆိုပါ အမျိုးသား အဆိုတော်လောက် left-tone ချပြီး
ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ ဗိုကယ်လ် ရိန့်ခ်ျ မတူဘူးရယ်လေဗျာ…
သူ့ဟာသူ ကြိုက်ရာပေးခွင့် ပြောခွင့် ရှိရဲ့လေဗျာ..
တနေ့သေကြရမည် ..မသေခင် လုပ်ချင်တာလုပ်ကြ….
ကျုပ်တော့ လူမိုက် ၀င်လုပ်လိုက်ပီ
“ထွက်ပေါက်များ ပိတ်ကာထားတယ် လောကကြီး မိုးလင်းတော့မယ် ဖွင့်ပေးဦး”တဲ့
Remember power 54 that was not allowed by censorship? Some people used to change their attitudes depends on situation and I can understand Lay Phyu’s word and respect his right of freedom to choose. On the other hand ,acelebrity hasaimplicit obligation not to mislead public. If he really believed in what he’s doing, I really don’t have nothing to say. We have to agree to disagree on so many issues and that might be part of democratic practices that we need to nurture.Despite the fact that he’sapopular rock star, I expect that there is little or no impact ( for the public’s decision regarding voting) on the results of by-elections as things are so obvious now evidenced by daw Su’s several campaign trips that shake the emotions of ruling party’s senior leadership.We might have confessed that though there are majority of public supporting NLD seriously we should also be careful not to unintentionally create an environment to influence others (against their volition to vote for NLD and we must try to respect their democratic rights if we really wish to go inademocratic way.
သူလည်းကြိုက်တဲ့ပါတီမဲပေး ကိုယ်လည်းကြိုက်တဲ့ပါတီမဲပေး ဟုတ်ဘူးလား သူလည်းသူကိုယ့်ပိုင်စိတ်နဲ့သူ ကိုယ်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်နဲ့ကိုယ် ဘဲလေ တို့ကတော့ဒီတခေါက်မဲပေးရမယ့် စာရင်းထဲမပါဘူး
ကို ဘာကြောင့်အပြစ်မြင်နေရတာလဲဗျာ။ခင်ဗျားလည်းလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ရှိသလို ကိုလေးဖြူသာ
ပြီးရင် ကိုယ်စိုက်တဲ့ အပင်ရဲ့ အသီး ကိုယ်စားရမှာပဲ။
လေးဖြူကလေးဖြူ ကြံ့ဖွံ့က ကြံ့ဖွံ့ပါ၊ ကြံ့ဖွံ့ကို မဲထည့်လို့ လေးဖြူက ကြံ့ဖွံ့မဖြစ်သွားနိုင်သလို လေးဖြူအသံတွေလည်း ပျက်မသွားနိုင်ပါဘူး။ NLD ကိုကြိုက်ကြတာလည်း လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်သလို၊ ကြံ့ဖွံ့ ကိုမဲထည့်တာလည်း လွတ်လပ်ခွင့်ပဲ။ လေးဖြူကြံ့ဖွံ့ကိုမဲထည့်လို့ မကြိုက်တော့ဘူးပြောရင်လည်း ဒါလွတ်လပ်ခွင့်ပဲ။
ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ လူတိုင်းလွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလဲခွင့် ရှိနေမယ်။
အေးပေါ့ကွယ်…အေးပေါ့ ဆိုတော့ ပါဝါ 54….အာခံခဲ့တော့လည်းသူဘဲ..
ကိုမဲပေး….အမေစုခြံထဲ အရှက်မရှိ ဓါတ်ပုံဝင်ရိုက်သေး။ လုပ်ရပ်နဲ့လုပ်ဇာတ်တွေ…ဒီမိုကရေစီဆိုတာသဘောမပေါက်ဘူးလားလာမမေးနဲ့။
ဂျာနယ်တစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသော လေးဖြူ၏ အင်တာဗျူးမှာ အမှန်တကယ်
မေးမြန်းဖြေဆုိုထားခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မဟုတ်ပဲ ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာဖြင့် လုပ်ကြံဖန်တီးထားခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားဥပဒေကြောင်းအရ အမြန်ဆုံး ရင်ဆုိုင်ဖြေရှင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Iron Cross (facebook) စာမျက်နှာ
အဲ့လိုမပြောရဘူးလေ အခုလည်း သူတို့တွေ NLD အတွက် ဘယ်လောက်လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်နေလည်း ဆိုတာတော့ သိသင့်ပါတယ် သူမပြောပြချင်လို့ ဒီလိုပြောလိုက်တာနေမှာပါ သူဘယ်ကိုပေးမလည်းဆိုတာ
သူ့ရဲ့ အမာခ့ပုရိတ်သတ် ဖြစ်တဲ့ အကိုက အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ